यसको तिन अक्षहरूको एउटा त्रि आयामिक वस्तु केही घेरामा घुमाउन, वस्तु चयन गर्न क्लिक गर्नुहोस् , र तब यसको परिक्रमण प्रदर्शन गर्न फेरि क्लिक गर्नुहोस । तपाईँंले घुमाउन चाहनु भएको वस्तु दिशानिर्देशमा एउटा हेण्डल तान्नुहोस् ।
तपाईँंले स्लाईडमा तान्नुभएको ठाउँमा एउटा भरिएको घन कोर्दछ.एउटा त्रि आयामिक आयात कोर्न,जब तपाईँंले तान्नुहुन्छ सिफ्ट तल सार्नुहोस।
तपाईँंले स्लाईडमा तान्नुभएको ठाउँमा एउटा भरिएको गोला कोर्दछ.एउटा गोलाकार कोर्न,जब तपाईँंले तान्नुहुन्छ सिफ्ट तल सार्नुहोस्.
तपाईँंले स्लाईडमा तान्नु भएको ठाउँमा एउटा बेलना कोर्दछ जुन वृत्तमा आधारित छ.एउटा अण्डाकारमा आधारित बेलना कोर्न, जब तपाईँंले तान्नुहुन्छ सिफ्ट तल राख्नुहोस्.
तपाईँंले तान्नु भएको भएको स्लाईडमा एउटा कोन कोर्दछ जुन एउटा वृत्तमा आधारित छ एउटा एउटा अण्डाकार वस्तुमा आधारित कोन कोर्न , जब तपाईँंले तान्नुहुन्छ सिफ्ट तल राख्नुहोस.
तपाईँले जहाँ स्लाईडमा तान्न खोज्नु भएको हो त्यहाँ आधारित वर्ग सँग पेरामिडको चित्र कोर्नुहोस् , तपाईँले जहाँ तान्नु हुन्छ र त्यहाँ तल होल्ड गर्नुहोस् । पेरामिडको आधार का लागि फरक बहुभूज परिभाषा गर्नका लागि,खोल्नुहोस् 3D Effects संवाद र क्लिक गर्नुहोस् Geometryट्याब,खण्डहरू क्षेत्र मा, स्तर गरिएको बाकसमा बहुभूजका लागि साइडहरूमा सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस् तेर्सो, र त्यसपछि हरियो जाँच बाकसमा क्लिक गर्नुहोस्
तपाईँंले तान्नु भएको स्लाईडमा एउटा गोलो आकार भएको वस्तु कोर्दछ जुन एउटा वृत्तमा आधारित छ.एउटा अण्डाकार वस्तुमा आधारित टोरस कोर्न , जब तपाईँंले तान्नुहुन्छ सिफ्ट तल राख्नुहोस ।
तपाईँंले तान्नु भएको स्लाईडमा एउटा कचौरा आकार भएको वस्तु कोर्दछ जुन एउटा वृत्तमा आधारित छ.एउटा अण्डाकारमा आधारित शेल कोर्न, जब तपाईँले तान्नुहुन्छ सिफ्ट तल राख्नुहोस.
तपाईँंले तान्नु भएको स्लाईडमा एउटा गोलाको आधा भाग कोर्दछ. एउटा अर्ध गोला कोर्न, जब तपाईँंले तान्नुहुन्छ सिफ्ट तल राख्नुहोस.
Title is: त्रि आयामिक वस्तुहरू